Iwo akanakisa IDEs ako aunofarira GNU / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Un IDE (Yakabatana Yakasimudzira Nharaunda), kana yakasanganiswa nharaunda yekuvandudza, hapana chimwe chinopfuura suite yezvishandiso zvinoshandiswa nevagadziri uye mapurogiramu kugadzira software. Kutenda kuma IDE aya haufanire kushandisa akaparadzanisa zvinyorwa kunyora kodhi yekodhi, kana compiler kuumbiridza, kana imwe debugger. Ivo vanowanzo sanganisa izvo zvese, uye zvimwe zvinopfuura izvo.
Linux, kunyanya Ubuntu, yava inonakidza kwazvo chikuva chevagadziri. Kana iwe urikufunga kutanga kuronga kubva kune ino inoshanda system, heino runyorwa nemamwe emhando dzakanakisa IDE dzauinazvo izvozvi ...
1 Bluefish Mhariri
4 kudzikatidzika kwezuva
5 akaisa zvikomberedzo
7 Razaro IDE
11 Qt Musiki
Bluefish Mhariri Haisi IDE saizvozvo, asi inogona kuve chishandiso chakanakira avo vanotsvaga chimwe chinhu chine simba mukusimudzira padandemutande. Muzviitiko izvi vanodudzirwa mitauro isingade kuumbika. Uye mupepeti uyu anogona kuve nezvose zvaunoda uye nezvimwe, senge yekumisikidza sosi, auto-chitupa, yakasimba injini yekutsvaga uye yekutsiva chishandiso, rutsigiro rwekubatanidza zvirongwa zvekunze senge make, lint, weblint, nezvimwe.
Geany inozivikanwa kwazvo paLinux. Iyo isingareme IDE inotsigira yakawanda yemitauro inozivikanwa. Izvo zviri nyore uye zvinokurumidza kuvandudza, iine mabasa ekutanga aunotarisira kubva kuchirongwa chakadai, senge auto-chitupa, kuratidza kwe syntax, kodhi auto-yekupedzisa kana snippets, nezvimwe.
Zvakare inosanganisira a plugin system kuwedzera kugona kwayo, ichiita kuti inyanye kunakidza mushanduro dzayo dzazvino.
Iyo kodhi mhariri akaisa zvikomberedzo Inogona kuverengerwa pakati peLinux IDEs, kunyangwe iri chirongwa chakagadzirwa neAdobe kunyanya yekuvandudza webhu, sezvakaitika kune yekutanga pane iyi runyorwa. Zviri nyore kushandisa uye kushanda, neakawanda maturusi pamwe nemukana wekuwedzera plugins.
Microsoft inozivikanwa IDE yakave zvakare yakatakurirwa Linux. Ndiani angati pakati peADE epuratifomu iyi paizove neiyo yeRedmond makore mashoma apfuura ... Asi hongu, ndizvozvo, kana iwe ukagadzira yeWindows, pamwe ungasarudza kuzviita kubva nekukurumidza uye zvine simba. Visual Studio Code.
Razaro IDE chishandiso chinokurumidza kwazvo, chemahara, chemahara chekuvandudza icho chinowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, kusanganisira GNU / Linux. Iyo yakavakirwa paiyo Object Pacal mutauro uye iri imwe nzira huru kune inozivikanwa Delphi.
Anjuta imwe yeiyo maIDE anowanikwa eLinux aunoda. Iyi yakasanganiswa yekuvandudza nharaunda inobvumidza kuronga mumitauro yakaita seC, C ++, Java, Python, uye zvakare Vala. Inosanganisira akawanda epamberi epurogiramu maficha. Uye zvakare, yakanyatsobatanidzwa neGTK (GNOME).
Imwe inozivikanwa IDEs ndeye NetBeans. Yeyakasununguka uye yakavhurika suite iyo inozivikanwa mune yeJava programming mutauro. Zvakare, ine nhamba huru yemamodule ekukuwedzera.
Kune avo vanosarudza kushanda nemutauro wechirongwa Nguruve (yakatorwa kubva BASIC, uye yemahara pasi peGNU GPL rezinesi), iwe unozokoshesa kuziva Gambas3. Imwe yeaya maIDE anowanikwa kuLinux kugadzira mafomu ane mabhatani, zvinyorwa zvemavara, uye zvimwe zvakawanda zvinoonekwa zvinhu.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, kune zvekare imwe yeaya anozivikanwa IDEs, senge Qt Musiki. Seizvo zita rayo rinoratidzira, yakanyatsogadzirirwa maQt maapp. Yakagadziridzwa naTrollTech uye iyo yaunogona kusimudzira kumatunhu akasiyana desktop, kunyangwe eApple uye iOS nhare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iwo akanakisa IDEs ako eGNU / Linux kugovera
Iko hakuna kupokana kuti iwo ese akanaka mameseji edhita. Uye kunyange mamwe acho akanaka IDEs. Asi runyorwa urwu nderechinyakare uye haruna kukwana. Ko zvakadii neKDevelop? Izvo zvakanyanya kupfuura mitauro yakawanda uye muchinjika-chikuva IDE. Uye Kate? Zvichida mumwe wevapepeti vemberi vanogona zvakare kushandiswa seine simba IDE.
Pindura kuna Eloy
Mabhureki ari kuzosiiwa.
Nei vakashandisa mufananidzo kubva paWebStorm kana PhpStorm uye vasina kana kuzvitaura?
Edward Snowden anofunga kuti GIMP yaizokunda Photoshop kana ikavandudza chimiro